Xog: Amaro la dul dhigay RW Rooble intii uu socday kulankii Habar-Khadiijo – Hornafrik Media Network
Xog: Amaro la dul dhigay RW Rooble intii uu socday kulankii Habar-Khadiijo
By Liibaan Nuur	 On Oct 10, 2020
Faah-faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxeya kulamo xasaasi ah oo ka dhacay xaruunta Habar-khadiijo oo degantahay hey’ada NISA, kulankaasi oo u dhaxeeyay Ra’iislul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble iyo Taliyaha NISA Fahad Yasiin.
Xog hoose oo aan halnay ayaa tilmaameysa in Ra’iisul wasaaradaha xubnihii la socoday oo ay kamid ahaayeen xogheenadiisa gaarka ah iyo la taliyaashiisa laga reebay in kulanka qeyb ka noqodaan, waxaana la sheegay in kulanka dibad joog ka ahaayeen gebi ahaanba.
Saraakiil ka tirsan sirdoonka Soomaaliya oo magacooda qariyay ayaa laga soo xigtay in kulanka uu ahaa mid labo geesood ah oo dhaxeeyay Ra’iisul wasaare Rooble iyo Taliyaha Nabad sugidda, sidoo kale waxaa qeyb ka ahaa Taliyaha hoggaanka dabagalka Cabdullahi Dheere, xogahaya gaarka ah ee Fahad Yaasiin, madaxa Technology-da, hogaanka dibada NISA iyo Cabdullahi Kulane oo ah ku xigeenka Fahad Yaasiin.
Kulanka ayaa daarnaa sidii Ra’iisul wasaaraha ula jaanqaadi lahaa arrimaha siyaasadda ee isaga ka horeeyay, isla markaana ula socodsiin lahaa NISA, tallaabo kasta ka hor inta uusan qaadin.
Taliyaha Nabad sugidda ayaa la sheegay in uu sharaxaad kooban siiyay Ra’iisul Wasaare Rooble isagoo hadalka ku wareejiyay Taliyaha hoggaanka dabagalka siyaasiyiinta Cabdullahi Daahir oo loo yaqaano Cabdullahi Dheere oo ah nin ay saaxiibo dhow yihiin Fahad Yaasiin.
Ilo xog ogaal ah ayaa sheegay in Taliyaha dabagalku faah-faahiyay u jeedada kulanka ay u fadhiyaan, waxuuna u dhiibay file ay ku qornaayeen heshiis sir ah oo NISA ay la gashay ururka Alshabaab, kaas Ra’iisul Wasaaraha loo ogolaaday in uu wax ka ogaado, iyadoo kadibna laga celiyey markuu akhristay.
Isfahamkan ayaa la sheegay in hogaanka sare ee NISA ay la galeen Alshabaab bishii Ramadaan ee tagtay, waxuuna dhigayaa in Al-shabaab joojiyaan qaraxyada magaalada Muqdisho, taas bedelkeedna lacag la siiyo 3-dii bilba mar, waxaana la sheegay in uu fududeeyay heshiiskan Cabdullahi Dheere oo ah Taliyaha Dabagalka oo horay ugu tirsanaa jiray Alshabaab.
Ra’iisul wasaare Rooble ayaa su’aalo ka keenay arimaha qaar hase ahaatee waxaa durba hadalo kul kulul kala horyimid Taliyaha dabagalka, isagoona kula kaftamay hadalo umuuqday handadaad, waxaana durba hadalka loo bedelay kaftan, sida goobjoogayaalku noo sheegeen.
Taliyaha Dabagalka ayaa kulanka ka dhex sheegay in sanadkaan siyaasiyiin badan ay is hayaan, shaqo badan utaalo, balse Raisul wasaaraha laga rabo in uu dhiso MD Farmaajo wixii kalana isaga dhameystiri doono, wuxuuna carabka ku dhuftay siyaabaha uu ula tacaali doono Siyaasiyiinta ka hortimaada qorshaha socoda, isagoo u qeybiyey labo qeybood. Siyaasiyiinta xilka haya kuwaas oo uu sheegay in qaabka ugu fudud loola tacaalo ay tahay in la sumeeyo halka kuwa aan xilka haynin ama la qaarijin karo ama laxiri karo.
hadalkaan ayaa muujinaya qorshayaasha halista ah ee laga yaabo in Taliyaha hogaanka Dabagalku ku dhaqaaqo.
Cambaareyn xooggan oo ka dhalatay Xadiis ay si qaldan u adeegsatay Rihanna
Afmadow: Golaha deegaanka oo soo doortay guddoomiye cusub